Soo dejiso darbiyada derbiga Windows: 10 -ka bog ee ugu fiican | Madasha Mobile -ka
Soo dejiso darbiyada derbiga Windows: 10ka bog ee ugu fiican
Qof walba waa ka duwan yahay. Dhammaanteen waan leenahay dhadhankeena iyo mudnaantayada. Taasi waa sababta xulashada gidaarka la doorbiday ee kombiyuutarkeenna ay tahay arrin aad uga muhimsan sidii ay u ekaan lahayd jaleecada hore. Dhammaanteen waxaan jecel nahay inaan helno annaga oo leh gidaar gaar ah markaan dooneyno inaan isticmaalno aaladahayaga, kombiyuutarka ilaa taleefanka gacanta. Laakiin mararka qaarkood, helidda sawirka kaamilka ah ma aha sidaas fudud. Xagee laga helaa waraaqaha gidaarka Windows?
Runtu waxay tahay inay jiraan wax badan oo laga dooran karo. Aad u weyn tirada naqshadaha iyo sawirrada, intaad ku dhiiratid inaad qiyaasto. Dad badan asalka ugu fiican ayaa ah sawirka carruurtooda ama qoyskooda; Qaar kale waxay doorbidaan muuqaal dhiirigelin leh, asal aan la taaban karin, sawir kittens ah, midabada kooxda kubbadda cagta, qaabka filimka ay jecel yihiin… Oo weliba waxaa jira kuwa ka cararaya caadadii, si joogto ah isu beddelaya, iyagoo raadinaya asalka ugu xiisaha badan iyo asalka.
Waana in gidaarku uu aad uga badan yahay walxaha qurxinta fudud. Waa waddo muujiyo shakhsiyaddayada. Intaa waxaa dheer, waxay noqon kartaa mid awood leh isha waxyi iyo dhiirigalin markaad u fadhiisanayso inaad shaqayso, ciyaarto, abuurto ama qabato hawl kasta oo kale oo leh qalabkeena.
Macno malahan waxa uu yahay qaabka gidaarka aad ugu jeceshahay. Internetka waxaa jira kuwo badan bogagga, ilaha internetka iyo codsiyada kaas oo aan ku soo dejisan karno darbiyada daaqadaha Windows oo aan la tirin karin oo kala duwan. Waxaan dooranay 10 ikhtiyaar oo waaweyn:
1 Nexus Desktop
4 Waraaqaha HD
7 Miisaska Fudud
10 Hantida Warqadda
Wax aan ka yarayn 1,6 milyan oo gidaarro Windows ah ayaa lagu soo ururiyey degelkan, Nexus Desktop, si loogu isticmaalo PC -gaaga ama kiniinigaaga ama taleefankaaga gacanta. Si ka duwan bangiyada sawirrada kale ee aan u xulannay in liiskan la sameeyo, kuwa ku jira degelkan waa darbiyo -dhabeed dhab ah. Waxaana jira iyaga dhadhan kasta.
Galleries -ka ayaa si fiican u jira lagu kala saaraa qaybaha. Shabakadda waxaa quudiya tabarucaadka xubnaheeda (in ka badan 1,5 milyan oo isticmaale), oo aan soo dejisan karno oo wax ka beddeli karno sida aan dooneyno inaan ula qabsanno shaashadaha aaladahayaga.
In kasta oo ay run tahay inay jiraan goobo badan oo onlayn ah oo aad ka heli karto darbiyada gidaarka, laakiin midkoodna kuma tartami karo Nexus Desktop -ka mugga fondos de pantalla de Tayo sare.
Intaa waxaa dheer, Desktop Nexus waa bulsho dalwaddii ka kooban tahay dad xamaasad leh oo ka socda dunida sawirka iyo farsamada. Websaydhku wuxuu u oggolaanayaa xubnaha inay is dhexgalaan, la wadaagaan faallooyinka waqtiga dhabta ah hal -abuureyaasha (farshaxan -yahannada ama sawir -qaadayaasha), iska diiwaangeliyaan quudinta RSS oo hel ogeysiisyo mar kasta oo darbiga cusub lagu dhejiyo mid ka mid ah qaybaha ay jecel yihiin. Aad u xiiso badan.
Malaayiin fannaaniin ah oo adduunka oo dhan ah ayaa ku soo bandhiga hal -abuurkooda garaafka Deviantart
Websaydaan dhab ahaantii waa a beesha caalamka ee fanaaniinta. Bar kulan oo lagu soo bandhigo meesha lagu muujiyo laguna wadaago curinta nooc kasta leh. Sidoo kale sawirro loo rogi karo darbiyo cajiib ah.
Deviantart waxay leedahay labaatan sano gadaasheeda iyo in kabadan 60 milyan oo isticmaale oo adduunka ah. Asalkeeda weyn oo ka kooban in ka badan 358 milyan oo sawir, waa inaad heshaa mid adiga kugu habboon. Shabakadani waxaa loogu talagalay inay u oggolaato fannaaniinta garaafyada iyo muuqaalka inay muujiyaan shaqooyinkooda oo ay u diyaariyaan dadweynaha. Intooda badan waa xor oo qof walba si xor ah ayuu u isticmaali karaa.
Ururinta Shaqsiyeed ee Ryan McGuire: Gratisography
Magaca horeba wuxuu ina siinayaa tilmaan muhiim ah. Jaahilnimada waa degel aad ka soo dejisan karto sawirro iyo sawirro gebi ahaanba aan boqornimo lahayn. Bangigan weyn ee sawirka waxaa abuuray naqshadeeyaha iyo sawirqaadaha Mareykanka Ryan mcguireby Daanyeer Design.
Muuqaalka ka duwan Gratisography -ga mareegaha kale ee la midka ah ayaa ah in ay tahay a ururinta shaqsiyeed. Dabcan, ururinta weyn. Dhexdeeda waxaan ka heli doonnaa sawirro maaddooyinka ugu kala duwan, qaarkood runtii waa kuwo gaar ah oo, sidaa darteed, ku habboon kuwa doonaya inay yeeshaan warqad -gaar ah.
Sawirada ayaa noqon kara lagu soo dejiyey qaraar sare oo lacag la'aan ah (inkastoo deeqaha la aqbalo). Waxaa loo isticmaali karaa ujeedooyin ganacsi iyo mid shaqsiyeed labadaba. McGuire wuxuu ku cadeynayaa websaydhkiisa: dhammaan sawirradiisa waxaa lagu bixiyaa shuruudo la mid ah Creative Commons Zero.
Waraaqaha Daaqadaha ee Tayada Sare leh ee ku dhex yaal Wargeysyada HD
Beddel aad u xiiso badan oo lagu soo dejisto darbiyada derbiga ee qeexidda sare leh. Waraaqaha HD waa bog noo saamaxaya inaan dhex marno qaybaheeda ugu caansan iyo lacagihii ugu dambeeyay ee la daabacay. Waxa kale oo ay leedahay xulasho aan kala sooc lahayn.
Sidee u shaqeysaa? Dhinaca bidix ee bogga waxaa ku yaal liis leh qaabab kala duwan oo xal. Waxa kaliya oo ay tahay inaad sameyso ayaa ah inaad doorato midka ku habboon astaamaha shaashaddaada oo ka dhex raadso soo jeedinno maaliyadeed oo badan oo aan halkaas ka heli doonno. Kadib, kaliya guji sawirka si ay si otomaatig ah u soo dejiso.
Link: Waraaqaha HD
Pexels waxay ku bixisaa sawirro bilaash ah ruqsaddeeda
Gebi ahaanba bilaash ah, sawirro tayo sare leh, oo ku xiran liisanka mareegaha. Ku habboon waraaqaha darbiga Windows. Gudaha Pexels sawirada oo dhan waa la sumadeeyay si ay aad ugu sahlan yihiin in laga helo raadinta fudud.
Boggaan waxaa ku jira boqolaal kun oo sawirro bilaash ah. Tirada sawirrada lagu heli karo kharash eber ah ayaa sii kordhaya maalinba maalinta ka dambaysa. Dhammaantood si taxaddar leh ayaa looga dhex xushay sawirro badan oo adeegsadayaashu maalin walba soo geliyaan. Ugu dambayntii, kuwa loo soo dejinayo soo -dejintu waxay buuxiyaan taxane ah shuruudaha ugu yar oo tayada mudnaanta la siinayo.
Pexels waa mashruuc la abuuray 2014. Mid ka mid ah sifooyinkeeda kala duwanaanshaha weyn ayaa ah in ay bixiso a shati hal -abuur leh. Tani waxay u oggolaaneysaa soo dejinta bilaashka ah iyo adeegsiga sawirradeeda in kasta oo ay si cad u mamnuucday in wax laga beddelo ama wax laga beddelo, iyo sidoo kale adeegsiga ganacsi ama iibinta aaladaha kale.
Pixabay waxaan ka helnaa tiro badan oo sawirro bilaash ah
Kani waa bangi muuqaal kale oo aad loo jecel yahay. Pixabay Waa bilaash in la isticmaalo, inkasta oo si loo helo cabbirrada sawirrada iyo qaraarrada qaarkood ay lagama maarmaan tahay in la is -diiwaangeliyo. Khayraad wanaagsan oo lagu helo waraaqaha gidaarka.
Pixabay waxay isu soo bandhigaysaa inay tahay mareeg caalami ah oo loogu talagalay is-dhaafsiga sawirro tayo sare leh. Kaliya maahan sawirro, laakiin sidoo kale sawirro, garaafyada vector, iyo muuqaalka filimka. Dhammaan waxa ku jira waxay ka diiwaan gashan yihiin goobaha dadweynaha sida ku cad shatiyada Creative Commons / Creative Commons CC0.
Wax yar baa ka badan: Desktops fudud
Fadliga fudaydka. Miisaska Fudud wuxuu ku saleeyaa bixinta darbiyada daaqadaha daaqadaha naqshado fudud oo aad u yar, oo leh midabyo siman iyo abuuritaan fudud. Dhammaan ka soo horjeedda waxa shabakadaha sida Deviantart iyo kuwa kaleba na siiyaan.
Ma aha hibo la’aan ama himilo la’aan. Dhab ahaantii, gidaarrada fudud ee loo yaqaan 'Desktops' ayaa si ulakac ah loogu qaabeeyey, si aysan indhahayaga u jeedin ama jahwareer ugu abuurin astaamaha kala duwan ee desktop -ka. Hubaal dad badan tani waa wax lagu daray.
Link: Miisaska Fudud
Kuwa aan weli garan, Aadaabta waa degel XNUMX% oo lacag la’aan ah oo aad kula wadaagi karto sawirro aan xornimo lahayn, oo qaraarkoodu sarreeyo. Bogga waxaa abuuray wakaaladda suuq -geynta hal -abuurka ah Shaybaadhka Crew. Dhexdeeda oo kaliya sawirrada ayaa lagu daabacay hoosta Liisanka Creative Commons Zero. Taas micnaheedu waa in qof kasta uu koobi karo, wax ka beddeli karo, qaybin karo oo isticmaali karo sawirrada si bilaash ah oo aan fasax ka haysan milkiilaha. Mid ka mid ah adeegsigaas waxaa laga yaabaa inuu u isticmaalo sawirrada darbiga.
Iyada oo leh nidaam la mid ah kan Pexels ama Pixabay, baanka sawirkan wuxuu leeyahay malaayiin sawir oo la sumadeeyay oo lagu kala saaray maado ahaan. Sanduuq khasnad weyn oo farahayaga saaran.
Sawirrada loogu talagalay darbiyada daaqadaha ee Wallhaven
Soo jeedinta wallhaven, marka lagu daro tiro aad u badan oo sawirro iyo sawirro ah oo loogu talagalay darbiyada gidaarka, waxay ka kooban tahay feyl ku takhasusay naqshado fudud oo dhinacyo badan leh. Waxoogaa isku xidid ah sida Desktops -ka Fudud.
Aad bay u fududahay in la isticmaalo, oo leh xulashooyin badan oo goobitaan iyo is -dhexgal nadiif ah oo wanaagsan. Haddii kale, Wallhaven waa bog tixraac u leh hal -abuurayaal badan oo wadaaga nashqaddooda (waxaa jira malaayiin sawir -gacmeed), kuwaas oo badankood bixiya tayo sare.
Ugu dambayntii, waa in la ogaadaa inay gebi ahaanba tahay lacag la'aan ah oo aan xayeysiis lahayn. Maxaad kaloo rabi laheyd?
Ka soo degso darbiyada derbiga Windows ee Wallpaperstock
Si loo xiro liiskan, beddel kale oo la tixgeliyo. Noocyo badan oo gidaarro kombiyuutar ah, in kasta oo leh qayb xiiso leh oo si gaar ah loogu go'aamiyey shaashadaha taleefanka gacanta.
Warqadaha darbiga waxay bixisaa qaraarro kala duwan oo isku asal ah. Adigoo gujinaya thumbnail -ka sawirka waxaad ku arki kartaa sawirka qaraarka caadiga ah, qaraarka shaashadda, iyo HD. Dhammaantood waxay diyaar u yihiin in lagu soo dejiyo lacag la’aan.
Link: Hantida Warqadda
Wadada buuxda ee maqaalka: Golaha Moobaylka » Internet » Soo dejiso darbiyada derbiga Windows: 10ka bog ee ugu fiican
Liiska xirfadaha WOW Classic ugu fiican